Yintoni ekufuneka bayazi abathengisi malunga nokuKhusela iLungelo leNgqondo | Martech Zone
NgoLwesibini, Meyi 10, 2016 UPaige Zandri
Njengokuthengisa-nayo yonke eminye imisebenzi yeshishini-ziye ngokuthembela ngakumbi kwitekhnoloji, ukukhusela ipropathi enomgangatho ophezulu wokuqonda kuyeyona nto iphambili kwiinkampani eziphumeleleyo. Kungenxa yoko le nto lonke iqela lentengiso kufuneka liqonde iziseko ze umthetho wepropathi enomgangatho ophezulu wokuqonda.
Yintoni ipropati enomgangatho ophezulu wokuqonda?
Inkqubo yezomthetho yaseMelika ibonelela ngamalungelo athile kunye nokhuselo kubanini bepropathi. La malungelo kunye nokhuselo lide lidlulele ngaphaya kwemida yethu ngezivumelwano zorhwebo. Impahla nezinto eziyimveliso yengqondo inokuba yiyo nayiphi na imveliso yengqondo ekhuselwa ngumthetho ekusetyenzisweni okungagunyaziswanga ngabanye kwezorhwebo.
Impahla nezinto eziyimveliso yengqondo-kubandakanya izinto, iindlela zeshishini, iinkqubo, indalo, amagama eshishini kunye neelogo- zinokuba phakathi kwezona zinto zibaluleke kakhulu kwishishini lakho. Njengomnini weshishini kuya kufuneka uqonde ukuba ukukhusela ipropathi enomgangatho ophezulu wokuqonda kubalulekile njengokugcina nayiphi na enye i-asethi kwiphepha lakho lokulinganisa. Kuya kufuneka uqonde amalungelo noxanduva olunxulunyaniswa nokwenza imali kunye nepropathi enomgangatho ophezulu wokuqonda.
Sebenzisa umthetho we-IP ukukhusela iiLungelo lakho lokuqonda
Kukho iintlobo ezine ezisisiseko sepropathi enomgangatho ophezulu wokuqonda: amalungelo awodwa omenzi wechiza, uphawu lwentengiso, amalungelo okushicilela kunye neemfihlo zorhwebo.
Ukuba uphuhlise itekhnoloji yobunini, ukhuseleko lomthetho welungelo elilodwa lomenzi unika inkampani yakho ilungelo elilodwa lokwenza, ukusebenzisa, ukuthengisa okanye ukungenisa into eyenziweyo okanye ukufumanisa ixesha elincinci. Logama itekhnoloji yakho inoveli, iluncedo kwaye ingacacanga, unganikwa amalungelo awodwa ekusetyenzisweni kwayo okuya kuqhubeka ngalo lonke ixesha lobunikazi.
Ukugcwalisa ilungelo lobunikazi kunokuba yinkqubo enzima kwaye ende. I-United States isebenza phantsi kweyokuqala ukufaka ifayile, ingeyiyo eyokuqala yokwenza inkqubo, oko kuthetha ukuba umqambi kunye nomhla wokuqala wokufayilisha uya kufumana amalungelo kwilungelo elilodwa lomenzi wechiza. Oku kwenza ukuba ixesha lokufayilisha kwakho libaluleke. Ukugcina umhla wokufayilisha wangaphambili, amashishini amaninzi akhetha ukwenza ifayile yokuqala ukuba ikhuseleke patent. Oku kubanika unyaka wokuba bagcwalise isicelo selungelo elilodwa lomenzi wechiza.
Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba ilungelo elilodwa lomenzi elikhutshwe yi-United States Patent kunye neOfisi yophawu lwentengiso (USPTO) isebenza eMelika kuphela. Ukuba inkampani yakho ikhuphisana phesheya kwaye ifuna ukukhuselwa kwelungelo elilodwa lomenzi kwamanye amazwe, kuya kufuneka ufake isicelo naphina apho ufuna khona ukhuseleko. ISivumelwano soBambiswano lwePatent senza oku kube lula ngeenkqubo zokufaka isicelo esisodwa selungelo elilodwa lomenzi wechiza ngaxeshanye kumazwe angama-148 angamalungu.
Njengoko nawuphi na umntu oqeqeshiweyo kwezentengiso esazi, iimpawu zorhwebo ziyindlela ebalulekileyo yokukhusela iimveliso zenkampani. Iimpawu zentengiso zikhusela nawaphi na amanqaku ahlukileyo, anjenge logo okanye igama lophawu, olwahlula uphawu lwakho kwabanye abakwimarike.
Ukusebenzisa nje uphawu lwentengiso kwezorhwebo kunokukhokelela kukhuseleko lomthetho oqhelekileyo. Okwangoku, ukubhalisa amanqaku akho kwi-USPTO akuqinisekisi kuphela ukuba ukhuselwe ngokupheleleyo, kodwa kukonyusa iseti yamayeza akhoyo kuwe ukuba umntu wophula uphawu lwentengiso yakho. Ubhaliso ke ngoko lubonelela ngezibonelelo ezibonakalayo kwiinkampani, kubandakanya isaziso esakhayo esiya eluntwini, ilungelo elilodwa lokusebenzisa uphawu ngokunxulumene nodidi oluthile lweempahla okanye iinkonzo ezidweliswe kubhaliso, kunye nesizathu somanyano sokwenza nakuphi na ukophulwa komthetho.
Ukuthengisa uphawu lokuthengisa ngokwendalo kubandakanya ukwenziwa kwemisebenzi yoqobo, nokuba ikwimo yemifanekiso yentengiso, ikopi yokuhlela okanye kwinto ebonakala ilula njengeposti yemidiya yoluntu. Olu hlobo lomsebenzi lunokukhuselwa ngamalungelo okushicilela. Ilungelo lokushicilela luhlobo lokhuselo olunikezelwa phantsi komthetho welungelo lokushicilela waseburhulumenteni "yemisebenzi yoqobo yobunini" ebekwe ngendlela ebonakalayo yokuthetha. Oku kunokubandakanya imisebenzi epapashiweyo kunye nengashicilelwanga enje ngemibongo, iinoveli, iifilimu kunye neengoma, kunye nekopi yentengiso, ubugcisa bemizobo, uyilo, isoftware yekhompyuter, kunye nolwakhiwo.
Umnini welungelo lokushicilela angabathintela abanye ekuthengiseni, ekwenziweni, ekulungelelanisweni, okanye ekuveliseni ngokutsha umsebenzi ngaphandle kwemvume — kwanemisebenzi efanayo efanayo esetyenziselwa injongo efanayo. Kubalulekile ukuba uqaphele, nangona kunjalo, ukuba amalungelo okushicilela akhusela kuphela indlela yokubonisa, hayi iinyani, izimvo, okanye iindlela zokusebenza.
Ngokubanzi, amalungelo okushicilela ngokuzenzekelayo ancamathela kumyili womsebenzi omtsha ngexesha lokudalwa kwawo, kodwa unokukhetha ukubhalisa ngokusesikweni kwiOfisi yeLungelo lokushicilela eMelika. Ubhaliso lubonelela ngoncedo olubalulekileyo, kubandakanya ukuba nengxelo kawonkewonke yelungelo lokushicilela, uqikelelo oluthile lokuba semthethweni, kunye nelungelo lokuzisa isimangalo solwaphulo-mthetho kunye nokuqokelela umonakalo onokubakho ngokusemthethweni kunye nemirhumo yegqwetha. Ubhaliso kwi-US Customs ikwavumela ukuba uthintele ukungeniswa kweekopi zomsebenzi wakho.
Olunye udidi lwepropathi enomgangatho ebalulekileyo yokuyikhusela ebalulekileyo kukukhusela iimfihlo zorhwebo zenkampani yakho. "Imfihlo yorhwebo" ichazwa njengemfihlo, ulwazi malunga nobunini obunika ishishini lakho ithuba lokhuphiswano. Oku kungabandakanya nantoni na kuluhlu lwabathengi ukuya kwiindlela zokuvelisa ukuya kwiinkqubo zohlalutyo. Iimfihlo zorhwebo zikhuselwe ikakhulu ngumthetho wombuso, oqhele ukwenziwa emva koMthetho weeNgcaciso zoRhwebo ngokuFanayo. Umthetho uthathela ingqalelo ulwazi lwakho lokuthengisa njengemfihlo yorhwebo xa:
Ulwazi luyifomula, ipateni, ukudityaniswa, inkqubo, isixhobo, indlela, ubuchule, inkqubo okanye esinye isixhobo esikhuselweyo;
Ukufihla kwayo kunika inkampani eyona nto iyiyo okanye enokubakho ngexabiso lezoqoqosho ngokungaziwa okanye ngokulula; kwaye
Inkampani ithatha iinzame ezifanelekileyo zokugcina imfihlo yayo.
Iimfihlo zorhwebo zikhuselwe ngokungenammiselo de ukutyhilwa eluntwini kwemfihlo kwenzeke. Zonke iinkampani kufuneka ke ziphephe ukuzixela okungalindelekanga. Ukuphumeza izivumelwano zokungachazi (NDAs) kunye nabasebenzi kunye nabantu besithathu yeyona ndlela isemthethweni exhaphakileyo yokukhusela iimfihlo zakho zorhwebo. Ezi zivumelwano zibeka amalungelo kunye noxanduva olunxulumene nolwazi oluyimfihlo, kwaye zikunika amandla xa kunokwenzeka usebenzise iimfihlo zakho zorhwebo.
Ukusetyenziswa gwenxa kwenzeka xa imfihlo yorhwebo ifunyenwe mhlawumbi ngeendlela ezingafanelekanga okanye ngokwaphula ukuzithemba, kwaye iyenzeka enkundleni. Ukuba inkampani yakho iyisebenzise kangakanani i-NDAs inokuba yinto esetyenziswa yinkundla ukuqinisekisa ukuba uthathe "iinzame ezifanelekileyo zokugcina imfihlo," ke kubalulekile ukuba uqinisekise ukuba inkampani yakho isebenzisa ii-NDA ezenziwe ngobuchule ngenxa yokhuseleko lwakho lwe-IP .
Igqwetha le-IP elinamava Ngaba nguMgaqo wakho wokuqala woKhuselo
Kwimeko yanamhlanje enokhuphiswano, kunyanzelekile ukuba inkampani yakho iqonde ngokupheleleyo impahla yayo kunye nokukhusela ngokufanelekileyo. Igqwetha lepropathi enomgangatho ophezulu wokuqonda inokunceda inkampani yakho ukuba ikhulise inzuzo yakho yokhuphiswano ngesicwangciso esiliqili sokukhusela i-IP.
Igqwetha lakho le-IP lilayini yakho yokuqala yokuzikhusela kwabanye usebenzisa okanye usebenzise kakubi i-IP yakho. Nokuba uliqabane negqwetha elingaphandle elifanelekayo, njengakwi- Inethiwekhi yangaphambili, okanye uqeshe i-full-time endlini, igqwetha le-IP likulungele kakhulu ukugcina i-IP yakho kufanelekile ukuba ibe yiyo.
tags: copyrighti-intellectual propertyipumthethozomthethouphawu lwentengiso olusemthethwenikuqalakuqala kwezomthethouphawu lwentengiso ebhalisiweyotmiimfihlo zorhwebouphawu
UPaige Zandri, uMlawuli weNethiwekhi yamaGqwetha e Ngaphambi kwezomthetho, linoxanduva lokuphuhlisa uthungelwano lwamagqwetha kwindawo nganye yokusebenza kukaPriori. UPaige ligqwetha elalisebenza e-NYC kwaye ungusihlalo we-Solo kunye neKomiti yoQeqesho oluQinisekileyo kuMbutho waseNew York County. UPaige waphumelela kwiBrooklyn Law School kwaye wayeliCandelo I umdlali webhola ethambileyo kwiDyunivesithi yaseMaryland, kwiBaltimore County.